Saturday 10th July 2021 15:21:00 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Waxyaabaha aan sida aasaasiga ah loo isticmaalin waxaa kusoo biiray galmada !
Waxa ay noqotay qayb kamid ah waxybaaha caadiga dadka la noqday.
Galmo samayntu waa ay ka wayntahay laba xubnood oo is galay ama laba jinsi oo kala duwan oo is dareemay. Marka aad qofka la galmooto sida qofku ganacsiga u maalgashado ayaad qofka aad la galmotay u maal gashatay dareen ahaan "emotional investment". Dareenka galmadu waa uu ka duwanyahay dareemada kale ee qofku dareemo sida naxdinta, baqdinta, murugada iyo xanuunka jireed . Waxa ay iyadu kulansataa dareen jireed mid maskaxeed iyo mid ruux ahaaneed "spiritually".
Marka nin rag ahi uu gabar dilo , murjiyo ama ka nixiyo , dareemadaas oo dhami waa ay soo gabagaboobaan oo mar un bay ka fara xalataa . Laakiin marka uu la galmoodo dareen ahaan ayuu maalgashaday. Hadii nin gabar u dhaawaco jir ahaan nolosheeda danbe dilkaasi saamayn kuma yeesho , laakiin hadii uu kufsado xata isaga oon dilin , waxaa burburaya dareenkeedii jireed , qalbiyeed , maskax ahaaneed iyo ruux ahaaneed . Si negative ah"taban" ayuu maalgashigaasi ku dhacay. Taasi waxa ay cadayn cad u tahay in galmadu ka wayntahay dareen jir ahaaneed.
Hadii uu la galmoodo isaga oo aan qasbina waxa uu u maalgashaday si positive ah "togan" , ruux ahaan jir ahaan iyo qalbi ahaanba xeradiisa ayay lug kula jirtaa ilaa maalmaha dhamaadkooda. Waxaa meesha yimaada wax ka yiraahdo "emtional attachment" oo ah inaad qofka dareen ahaan ku xirnaato ood ku sumadantahay. Arinta ah in ay xeradiisa lug kula jirto abid kaliya ma keento dareenka ayada ku maalgashaday ee waxaa kaloo loo tiriyaa jir ahaan oo marka ninku gabadha la galmoodo waxa ay xambaarsataa DNA-diisa , waa dheecaanka laga baaro gabadha jirkeeda marka la kufsado si loo ogaado ninka u galmooday .Dheecaankaas ayaa ku hara jirkeeda .
Waligeed waxa ay kujiraysaa xerada ninkaas , waa marka maalgashigu u dhaco si togan "positive" ah . Xataa hadii aysan waligeed dib ugu laaban ruuxdeedu isaga ayay la jirtaa. Waa meesha ay soomalidu uga maahmaahday "Gudayaal is bartay waa ay isu guuxaan" ! . Allaheede si walboo ay ahaato , tallaabada ugu fiican ee lagaa rabo inaad qaado waa in aadan maalgashan qof aadan raad xun uga tagayso , qof aadan diyaar u ahayn in aad la qaybsato maalmaha oo dhan hadii ay dantu keento , galmadu waa ay ka wayntahay dareen jireed .
Qormadan waa educational purpose (ulajeedo cilmiyeed) yaanan si kale loogu fikirin .
[War Hadda Soo Dhacay:-] Xisbiyada Mucaaradku Ma Aqbali Doonaan Gogosha Uu Madaxweyne Biixi U Fidiyay ?